नेपालमा वास्तविक प्रजातन्त्र नै छैन - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
- प्रभात चलाउने, सचिव, नेपाल पत्रकार महासंघ । अध्यक्ष, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपाल
१७ असार २०७४, शनिबार ०८:१४ August 1, 2017 Nonstop Khabar
नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था कस्ताे पाउनुभएको छ ?
तर, विश्वभर अहिले प्रजातान्त्रिक भनिने व्यवस्थामाथि एउटा जबजस्त प्रश्न उठेको छ । त्यो के भने प्रजातन्त्रका मुटु मानिने यी स्वतन्त्रता लागु हुने÷गर्ने कुरा हुन या यी केवल देखाउने कुरा मात्र हुन् ? नेपालमा त झनै नाजुक अवस्था छ । विगतदेखि अहिलेसम्म खासगरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक नेताहरुदेखि प्रशासनिक ओहोदामा बस्नेहरुले कुल्चिएर हिड्ने गरेका छन् । २००७ सालपछि नेपालमा पसेको प्रजातन्त्र पटक पटक अपहरणमा पर्दै गइरहेको छ र आजपर्यन्त नेपाली जनताले वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूती गर्न पाएका छैनन् । नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रेसको अली बढी विकास भयो र व्यवसायिक मिडियाहरु संख्यात्मक र गुणात्मक रुपमा बढ्दै गए । तर नेपाली मिडियामाथिको हस्तक्षेप भने झन झन बढ्दै गएको छ ।
सरकारले पत्रकार गिरफ्तार गरेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको छ । सरकारको यस कार्यको नेपाल पत्रकार महासंघले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । हामीले सरकारलाई तत्काल गिरफ्तार गर्ने कार्य बन्द गर्न र गिरफ्तार गरिएका पत्रकारलाई रिहा गर्न आग्रह पनि गर्यौ । नेपाल पत्रकार महासंघ सबै पत्रकारहरुको साझा र छाता संगठन भएकाले पत्रकारहरुमाथि हुने कुनै पनि ज्यादतीका बारेमा सधै गम्भीर रुपमा हेर्ने गर्दछ । यसपटक देखिएका घटनालाई पनि महासंघले सुरुदेखि गम्भीर रुपमा लिएको छ । महासंघका तर्फबाट म आफैले केन्द्रका सुरक्षा निकायका प्रमुख, तत् जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रशासनको जिम्मेवारी लिनेहरुदेखि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई कुराकानी गरे । साथै मिडियासँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुदेखि, मानवअधिकार संघ संस्थाहरु हुँदै अन्तराष्ट्रिय पत्रकार महासंघ समेतलाई यस विषयमा आवाज उठाउन, गिरफ्तारी बन्द गराउन र गिरफ्तार गरिएका पत्रकारलाई रिहा गर्न दवाव दिन आग्रह गरे । महासंघका अध्यक्षले पनि यस विषयमा धेरैपटक सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख र सिडियोहरुले असाध्यै निरिहतापूर्ण तरिकाले कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरु गिरफ्तार गर्ने कार्य आफूहरुलाई समेत मन नपरेको बताउँदै माथिबाट आएको आदेश मान्न बाध्य भएको र आदेश नमाने आफूहरु माथि नै कारवाही हुने बताउँछन् । यो माथि कहाँकहाँ हो भन्ने पत्ता लगाउने काम पनि भयो । केही सुरक्षा निकायका डिआइजी तहमा रहेका अधिकारीहरु र मन्त्रीहरुले सिधै टेलिफोन गरेर जिल्लामा प्रहरी प्रमुख र सिडियोलाई थर्काउने गरेको पनि पाइयो । उनीहरु को को हुन भन्ने सबै नाम र उनीहरुले दिएका अभिव्यक्तिहरु समेत सुरक्षित गरिएको छ । केही राजनीतिक दलका नेताहरु, प्रशासन र सुरक्षा निकायमा बसेका केही अधिकारीहरुले यतिबेला केही हदसम्म आफ्ना व्यक्तिगत रिस पोखिरहेको देखिन्छ । जुन कुरा उनीहरुकै निम्ति र देशका निम्ति राम्रो होइन ।
विगतमा पनि यसरी नै सरकारले सयौ पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्ने गरेको थियो । कृष्ण सेन इच्छुकलाई पटक पटक गिरफ्तार गर्दै जेल हाल्दै गरियो र अन्ततः बर्बरतापूर्वक हिरासतमै हत्या गरियो । मिलन नेपाली लगायतका पत्रकारहरुलाई अहिलेसम्म वेपत्ता पारिएको छ । दस वर्षे जनयुद्धकालमा प्रेसमाथि राज्य निकै अनुदार भयो । विगतमा सरकार जसरी कलमदेखि डराएको थियो, अहिले पनि त्यसरी नै डराएको देखियो । यसबाट एकातिर राज्यको दमनकारी चरित्र र अर्कोतिर उसको कमजोर मनस्थिति उजागर भएको छ । सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा संसारभरको इतिहासले बताउँछ कि राज्य जब कमजोर महशुस गर्छ तब हिंस्रक बन्छ । अनि दमनको साहारा लिन्छ । जब सरकार दमनमा उत्रन्छ, तब उसको पतनको सुरुवात हुन्छ । यो संसारभर सावित भएको कुरा हो र नेपालमा पनि यो कुरा इतिहासमा दोहोरिइसकेको छ । यसका बीचमा वतमान सरकारलाई एउटा गम्भीर प्रश्न छ कि आखिर सरकारले यी पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्नैपर्ने कारण के हो ? उनीहरुलाई गिरफ्तार नगरी के सरकारले चुनाव गराउनै नसक्ने अवस्था आएको हो ? यदि यसो हो भने त सरकार कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा नै झ्न उदाङ्गो हुन्छ । वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मेरै एउटै प्रश्न छ कि के तपाई पनि त्यसरी नै पत्रकार गिरफ्तार गर्नुहुन्छ ? संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्न थालिएको जनयुद्धको एउटा कमाण्डर अहिले त्यही संसदीय व्यवस्थालाई जोगाउन एकातिर लागिरहँदा अर्कोतिर यो व्यवस्थाप्रति अलिकति आलोचनात्मक विचार र आस्था राख्ने पत्रकार पक्कै छन् । तिनलाई गिरफ्तार गरेर के यो व्यवस्था जोगिन्छ ? फस्टाउँछ ?
नेपाल एउटा विशिष्ट राजनीतिक आन्दोलनका बीचबाट गुज्रिरहेको छ । विभिन्न विचार, दृष्टिकोण र बुझाईका बीचमा एकखालको संघर्ष चलिरहेको छ । व्यवहारमा देखाए पनि मुखमा मात्रै झुन्ड्याएको भए पनि ती सबै विचार, दृष्टिकोण र बुझाई भएकाहरुको अन्तिम उद्देश्य भनेको समुन्नत देश र समृद्ध र मुक्त जनता नै हो । यी कुरामा करिब १२ हजारको संख्यामा रहेका नेपाली पत्रकारहरुबीच फरक फरक बुझाई छ । आस्थाको विविधता जसरी पत्रकारहरुमा झल्किन्छ, त्यसैगरी आम जनता पनि त्यसरी नै आस्थामा विभाजित छन् । यो लामो द्वन्द्वको परिणाम हो । किनकि नेपाल परापूर्वकालदेखि आजपर्यन्त एक युद्धबाट अर्को युद्धमा प्रवेश गर्दै आएको छ । बुझाईको यो विविधताबीच पनि हाम्राबीच पेशागत मुल्य, मान्यताका बारेमा केही आधारभूत समानता छन् । सबै पत्रकारहरुका बीच नेपाल पत्रकार महासंघ साझा र छाता संस्थाका रुपमा छ । जसले श्रमजीवी पत्रकारहरुका हक, हित, अधिकार, बृतिविकास, दक्षता अभिवृद्धिका बारेमा वकालत गर्दछ । त्यस्तै प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आइलाग्ने चुनौतीका बारेमा आफूलाई त्यसको रक्षकका रुपमा अगाडि उभ्याउँछ । त्यससँगै निश्चित आस्था, विचार र दृष्टिकोणका आधारमा छुट्टै पत्रकार संगठनहरु पनि यहाँ छन् । हाम्रो क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपाल पत्रकारितालाई जनताको जीवनसँग जोड्नुपर्ने मान्यता राख्दछ । कर्पोरेट स्वार्थ, लगानीको प्रभाव, विज्ञापनको दवदवाबाट मुक्त राखी पत्रकारितालाई पीडित श्रमजीवी जनताको आवाज बनाउने मान्यता हाम्रो संगठनले राख्दछ ।
पत्रकारितालाई राज्यशक्तिको मुखपत्र बनाउनु हुँदैन । पत्रकारितालाई बोली हुने, बोली बिक्ने वा शक्तिसम्पन्नहरुको हतियार बनाउनु हुँदैन । सत्ताको गुणगान गाउने, त्यसकै अनुदानका भरमा मिडिया टिकाउने, विज्ञापन झार्ने र त्यही विज्ञापन झार्न पत्रकारिता गर्ने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । तब मात्र पत्रकारिता वास्तविक अर्थमा जनताको आवाज बन्न सक्छ । त्यसैगरी नेपालको मिडिया क्षेत्रमा निकै कमजोर श्रमअभ्यास भइरहेको छ । कडा श्रम तर कमजोर पारिश्रमिक नेपालको पत्रकारिताको विम्व बन्न खोज्दैछ । आजभन्दा २३ वर्ष अगाडि दवावका बीच ल्याइएको श्रमजीवी पत्रकार ऐन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन नहुँदै त्यसलाई विस्थापन गर्ने प्रयत्न पनि त्यत्तिकै भइरहेका छन् । मालिकले जतिबेला पनि एउटा श्रमजीवी पत्रकारलाई पेशाबाट बेदखल गर्ने काम यहाँ निकै भइरहेका छन् । त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्नु र पीडित पत्रकारहरुको पक्षमा काम गर्नु हाम्रो अर्को उद्देश्य हो । हामीले श्रमजीवी पत्रकारहरुको हितलाई संरक्षण गर्ने कतिपय कानुन निर्माणमा भूमिका खेलेका छौ । त्यसैगरी विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा आन्दोलन पनि गरेका छौं । आफ्नो पाखुरीमा जीवन धान्ने कमजोर श्रमजीवीका पक्षमा हामी सदैव लागिरहन्छौ ।